USihlalo weBhodi yezoKhenketho e-Afrika Ukhalela ukuManyaniswa kwe-Afrika ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » USihlalo weBhodi yezoKhenketho e-Afrika Ukhalela ukuManyaniswa kwe-Afrika ngoku
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • Iindaba zaseMzantsi Afrika eziQalileyo • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ibhodi yezoKhenketho yaseAfrika kumsitho obalulekileyo
Kumazwi okuvula kuMboniso wezoRhwebo we-Intra-Afrika wowama-2021 owawubanjwe ukusuka nge-15-21 kweyeNkanga, ngo-2021, eThekwini, eMzantsi Afrika, kwabakho isikhalo sokudityaniswa ukuze icandelo lezoqoqosho loKhenketho lisebenze ngendlela engcono. Oku kuxhaswa ngokupheleleyo nguSihlalo weBhodi yezoKhenketho e-Afrika (ATB) uCuthbert Ncube.
Ikhwelo elenziweyo lelokuba bonke abachaphazelekayo bahlangane njengebhloko emanyeneyo.
Kwaxelwa ukuba ngoku lixesha lokuba kuqalwe ukuvavanya iindlela kunye neempembelelo zokusilela kubhubhane kwaye kuphuhliswe imodeli edibeneyo yokubuyisela.
Iimodeli emva koko zinokutolikwa ukuze zenze into ekufuneka yenze iintsika zokunciphisa ifuthe loqoqosho lwe-COVID-19.
The IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB), eyasekwa ngo-2018, ngumbutho owaziwa ngamazwe ngamazwe ngokusebenza njengento ekhuthaza uphuhliso olunoxanduva lokuhamba kunye nokhenketho ukuya, ukusuka, kunye nangaphakathi kwingingqi yaseAfrika. Kudala ingumcebisi wokubonisa iAfrika njengendawo enye yokhenketho emanyeneyo.
Iimpembelelo zobhubhane ziya kuqhubeka ukuya kutsho ngo-2023 kwaye mhlawumbi ukuya kuthi ga ngo-2025, kodwa iindaba ezimnandi zezokuba iindawo ezininzi zelizwekazi ziye zafumana iindlela zokuziqhelanisa kwaye ziphuhlise amacebo okubuyisela ukulawula ukuvulwa kwakhona kweshishini lezoKhenketho.
Kufuneka kubekho izindululo eziqinileyo zoorhulumente ukuba bavumelane malunga neendlela ezinokuthi zenzeke ukuze kuvuselelwe ishishini lezoHambo noKhenketho eliphantsi koxinzelelo olukhulu ngoku. Kukho isidingo esingxamisekileyo sokusebenzisana ngeendlela zethu ezahlukeneyo, senze iinzame zokulungisa imiqobo yorhwebo kunye nokuhamba njengoko kusithiwa, “iAfrika ivulekele ishishini.” Ukuza kuthi ga ngoku, kusenzima ukuhamba ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye.
Imiba engundoqo kufuneka iqwalaselwe phambi kokuba i-Afrika yonwabele iinzame zokurhweba zangaphakathi kwe-Afrika ezingenamthungo. Icandelo lezoKhenketho mhlawumbi lelona candelo linamandla okukhula kwilizwekazi kwaye linokwandiswa ngokuzinzileyo ukuze lihlangabezane nale mfuno. Ngolungelelwaniso olusebenzayo kunye neengxoxo kuzo zonke iindawo zengingqi, iAfrika inokuzibonakalisa ngokwenyani kumboniso wokuHamba noKhenketho njengenye.
I-Afrika kuye kwafuneka incame izibonelelo ezininzi zentlalo noqoqosho kunye namathuba okukhula apho uKhenketho olunokuthi lube nako ukuhlawulela kwaye luzise kwilizwekazi liphela. Ingqondo emxinwa kunye nokukhusela nje isiqwenga selizwe le-Afrika ye-pie kwilizwe ngalinye yindlela yokubona okufutshane ephosa umfanekiso omkhulu. Kukho inani lamathuba anokuthi asetyenziswe ngokwamkela isicwangciso-qhinga esilungelelaniswe kakuhle njengoko uhlengahlengiso lwezivumelwano zamazwe amabini zikhuthazwa ukuqinisekisa ukuba amazwe asebenzisana kwimisitho yoshishino kunye necandelo lezoKhenketho ngokubanzi ngokukhula nokwanda njengeenjongo.
UNkosazana Zuma, owayesakuba nguSihlalo weMbumba ye-Afrika (i-AU) nowayesakuba nguMphathiswa waseChad
Owayesakuba nguSihlalo we-AU wayibethelela imfuneko yokuba ilizwekazi liqalise ukuxabisa amaphulo acetyisiweyo naphunyezwa yi-AU. Ngokukodwa, amaZwe angamaLungu kufuneka aqalise ukuprinta iPasipoti ye-AU eyayigunyaziswe ukuba iqaliswe kwilizwe ngalinye. Ukunqongophala komyolelo wamazwe wokuthatha inxaxheba kudodobalisa inkqubela kunye nokuphunyezwa kwale ncwadana yokundwendwela enokuthi ivule umnyango wobuninzi boKhenketho.
Lo Mboniso wezoRhwebo phakathi kwamazwe ase-Afrika ubuzinyaswe nguMphathiswa oHloniphekileyo nowayesakuba nguSihlalo we-AU uNkosazana Zuma ekunye nabalawuli beebhodi zezoKhenketho abavela e-Afrika nezinye izidwangube.
Ibhodi yezoKhenketho yaseAfrika (ATB) iyinxalenye ye Umanyano lwaMazwe ngaMazwe lwaBalingani bamaKhenketho (ICTP). UMbutho ubonelela ngenkxaso ehambelanayo, uphando olunengqiqo, kunye neziganeko ezintsha kumalungu awo. Ngothelelwano namalungu ecandelo labucala kunye nelikarhulumente, iBhodi yezoKhenketho yase-Afrika iphakamisa ukukhula okuzinzileyo, ixabiso, kunye nomgangatho wohambo kunye nokhenketho e-Afrika. UMbutho ubonelela ngobunkokeli kunye neengcebiso kumntu ngamnye kunye nesiseko kwimibutho engamalungu ayo. I-ATB iyakhula kumathuba okuthengisa, unxulumano noluntu, utyalo-mali, ukuthengisa, ukukhuthaza, kunye nokuseka iimarike ze-niche. Ngolwazi oluthe kratya, Cofa apha.